Wednesday September 30, 2020 - 06:45:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caabuqa Covid19 ayaa saacadihii lasoo dhaafay kumanaan qof oo hor leh ku dilay caalamka isagoo asiibay kumanaan kale walina waxaa taagan halista ah in labakaclaynta cusub ay ka halis badnaato bilaabashadii cudurk.
Tirakoobkii ugu dambeeyay wuxuu muujinayaa in virus-ka cusub ee Corona uu ilaa hada ku dhacay 32 milyan iyo 866 kun oo qof oo daafaha dunida ku nool, kuwaasoo qiyaastii hal milyan ay u dhinteen, halka in ka badan 22 milyan ay ka bogsadeen.
Wadanka Australia ayay neeftu kasoo fuqday madaxda dowladda kadib markii wax xoogaa hoos udhac ah laga dareemay gobollada wadanka, Australia oo sheegan jirtay in ay tahay dalka koowaad ee caalami ahaan ugu wanaagsan dhanka adeegyada caafimaadka ayaa ku fadeexadowday Carona Virus kadib markii ay awoodi waysay latacaalidda bukaanada tirada badan ee uu maalin walba soo ridanayay.
Bandowgii habeenkii ee lagu soo rogay sideed toddobaad ka hor ayaa laga qaaday dhammaan magaalada Milboon caasimadda gobolka Victoria oo ahayd xuddunta Virus-ka Carona ee dalka Australia.
Gobolkan wuxuu diiwaan galiyay shan kiis oo cusub oo ah coronavirus 24-kii saac ee lasoo dhaafay.
halka Seddex dhimasho ayaa la diiwaan galiyay taasoo ka dhigeysa tirada dhimashada gobolka 787 halka tirada guud ahaan Australia ay gaareyso 875 dhimasho ah, gobolka Victoria waa meesha ugu daran ee Carona uu dadka ku laayay kuwa kalane uu bukaanno ka dhigay.
wadanka Meksiko ee dhaca waqooyiga qaaradda America ayaa wali latiihaya gummaadka uu geysanayo Carona Virus, kumanaan kun ayaa isbuuc walba udhimanaysa cudurka halka kumanaan kale uu soo ridanayo.
Meksiko waxay ku jirtaa shanta dal ee safka hore uga jira wadamada uu halakeeyay caabuqan aan wali daawada loo helin.
Xogta laga helay Wasaaradda Caafimaadka ee Meksiko ayaa muujisay in tirada la xaqiijiyay ee kiisaska coronavirus-ka ay korortay oo ay gaartay 730,317 xaaladood, halka tirada u dhimatay virus-ka ay gaartay 76,430 oo dhimasho ah.
Mas'uuliyiintu waxay ku dhawaaqeen diiwaangelinta 3,886 kiis oo cusub, marka lagu daro dhimashada 187, intii lagu jiray afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay.
dhanka wadanka Mareykanka halaagga uu carona geysanayo ayaa halkiisi kasii socota waxaase soo baxay warar xaqiijinaya in cudurku uu si xowlli ah ugusii dhax faafayo xaafado ay ku badanyihiin dadka yahuudda xagjirayaasha ah.
Saraakiisha caafimaadka ee magaalada New York ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin sii socoshada sii kordheysa ee faafitaanka cudurka Corona ee qaybo ka mid ah koonfurta Brooklyn iyo Queens halkaas oo bulshada Yuhuuddu aad ugu badan yihiin.
Bulshooyinka Gravesend iyo Homesrist ee ku yaal Brooklyn, 6.75% kuwa la tijaabiyey waa laga helay, marka la barbardhigo 6% kiisaskii lahubiyay maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay.
Dadka Yahuudda ee xaafadahan ku dhaqan ayaa laga cabsi qabaa in Carona uu laayo kadibna eedayn dayacaad ku saabsan dusha looga tuuro dowladda mareykanka oo aad u taageerta Yahuudda oo ah cadowga ugu daran ee muslimiintu leeyihiin